Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in wakhtiga doorashada madaxweynaha ay go’aan ka gaari doonaan baarlamaanka cusub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGuddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in wakhtiga doorashada madaxweynaha ay go’aan ka gaari doonaan baarlamaanka cusub
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in wakhtiga doorashada madaxweynaha ay go’aan ka gaari doonaan baarlamaanka cusub
November 29, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Guddoomiyaha doorashada dadban ee Soomaaliya, Cumar Maxamed Cabdulle. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa markale dib u dhac kuyimid, sida uu shalay gelinkii dambe sheegay guddoomiyaha doorashada dadban ee Soomaaliya.
Guddoomiye Cumar Maxamed Cabdulle sidoo kale loo yaqaan Cumar Dhagey ayaa sheegay in doorashadu aysan dhici doonin 30-ka bishaan November sida horey loo qorsheeyay.
“Waxaan aad uga xunahay in aan la wadaagno dadka Soomaaliyeed in doorashada madaxweynaha ay dib u dhacday markale sababtoo ah xubnihii baarlamaanka, kuwaasoo codeyn lahaa ayaan diyaar ahayn,” ayuu yiri Cumar Dhagey oo saxaafada kula hadlay magaalada Muqdisho.
“Wakhtiga xiga ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxaa go’aan ka gaari doona xubnaha baarlamaanka ee cusub oo doorashadoodu hadda ka socoto dhammaan dalka.” Ayuu ku daray guddoomiyuhu.
Kadib marka ay dhammaato doorashada xubnaha aqalka hoose, taasoo la filayo in la dhammeeyo inta lagu guda jiro bisha soo socota ee December, xildhibaanada baarlamaanka ayaa dooran doona afhayeen kadibna madaxweyne.
Tani waa markii saddexaad oo ay dib u dhacdo doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa horey qorshu ahaa in ay dhacdo bishii lasoo dhaafay ee Agoosto, laakiin xukuumada Xasan Shiikh Maxamuud ayaa dhawaan dib ugu dhigtay 30-ka bishaan November, haddana waa mar saddexaad.
Sawiro: Nolosha murugada leh ee dumarka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ku heysata dalka Indonesia
Dumar Soomaaliyeed oo ka cararay dalkooda hooyo, ayaa gaajo, fakhri iyo guri la’aan ku heysataa caasimada dalka Indonesia ee Jakarta, sida uu daabacay wargeyska The Guardian oo kasoo baxa Britain. Related PostsMay 6, 2018 Garoowe [...]
Mareykanka oo duqeymo ka dhacay Puntland ku dilay 20 maleeshiyo oo ISIS ah labo bilood gudahood
Garoowe-(Puntland Mirror) Washington ayaa kordhisay duqeymaheeda ka dhanka ah kooxda ISIS ee ku sugan gudaha Puntland labadii bilood ee lasoo dhaafay. Qiyaastii 20 maleeshiyo ah ayaa lagu dilay duqeymaha Mareykanka ee gudaha Puntland ka dhacay, [...]